Semalt dia mamaritra ny fomba hiarovana ny WordPress tranonkala avy amin'ny hackers
Manolotra loharano goavana ho an'ny ankamaroan'ny olona ny Internet. Betsaka no manangana aterinetosehatra ahafahana manintona mpanjifa maro avy amin'ny toerana samihafa manerana ny tranonkala. Ny sasany amin'ireo toerana ireo dia ahitana ny motera fikarohana mampiasa ny Search EngineOptimization (SEO) na amin'ny tambajotra sosialy mampiasa ny Social Media Marketing (SMM).
WordPress dia manakaiky ny 24% -n'ny habaka aterineto rehetra eran'izao tontolo izao. izy ireoManana sehatra an-tserasera maimaim-poana izay azon'ny tsirairay ampiasaina sy hahazo tombony - nova web design and development. Ny plugins, ny tranokala DIY sy ny tranonkala hafa dia ao amin'ny codeManome sehatra misokatra ho an'ireo mpandraharaha sy mpitoraka bilaogy maro mba hananganana sehatra e-varotra. Na izany aza, ireo hackers dia miditra amin'ireo tranonkala ireofomba. Misy fanandramana hentitra amin'ny 94563 noho ny fandefasana site WordPress isa-minitra. Ity sary ity dia tonga noho ny sehatra misokatra izay mampihariharyireo rafitra rehetra. Vokatr'izany, WordPress dia afaka manolotra sehatra tsy azo antoka izay mety hampiasain'ireo mpanao hackers mba hamoahana ny sasany amin'ireo loza mampidi-dozafanafihana.
Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt ,Jereo ny torohevitra ilainao mba hiarovana ny tranokalanao WordPress amin'ny fanafihana hacking.
Ny fampiasana ny tenimiafina azo antoka dia zava-dehibe..Ny fanandramana hacker taloha dia matetika miezakany tenimiafina matevina alohan'ny hijanonany amin'ny fampiasana mahery. Ny tenimiafina toy ny 12345 dia tsy tenimiafina azo antoka. Amin'ny tranga hafa, aza mampiasa admintenimiafina izay anaran'ny zanakao na orinasa. Azonao atao ny mamela ny fampahalalam-baovao be dia be mora, ary afaka manao ny aterineto manontolo izanyfitandroana filaminana. Ankoatra izany, esory amin'ny mpanjifa ny maha-zava-dehibe ireo fepetra ireo.
Fanavaozana ny plugins sy ny rindrambaiko software
Ny fitazonana ny ordinateranao hatramin'izao dia afaka mamonjy anao amin'ny sasany amin'ireo fanafihana amin'ny Internet. InNy ankamaroan'ny tranga, ireo hackers dia mampiasa ny rohy mampidi-doza izay mitarika rakitra amin'ny tranonkala iray. Ohatra, ireo hackers dia afaka mampiasa ny scripting site. izanymanararaotra ny fanafihana tranonkala iray amin'ny alàlan'ny fampidirana ny baiko manerana ny endrika famantarana na ny hafainganam-pitenenana. Noho izany dia zava-dehibe nyDiniho ny sora-bolana sasany raha mihodina mankany amin'ny mpamaky iray ao anaty tranonkala iray ny mpampiasa. Ny fepetra iray hafa dia afaka mampiasa fitaovana fitsikilovana anti-espion. Ireo diany rindrambaiko izay afaka mamantatra ireo viriosy sy malware tahaka ny Trojans. Afaka mitoetra ho voaro ny tranokalanao.
Ho an'ny fampiharana eCommerce tsirairay, misy fomba maro ahafahana miditra amin'ny serverNy Internet dia miasa amin'ny sehatra fifanakalozana, izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa sy mandray baiko avy amin'ny navigateur. Toy izany koa, ny hackers dia mampiasa izany fahafahana izanyNy tranonkala dia mandefa sy mandray baiko mba hahazoana fidirana amin'ny server iray tsy ara-dalàna. Rehefa manao tranokala isika, ny mpampiasa sy ny fahafaham-po ny mpanjifa diaMatetika ny tanjontsika farany. Tsy afaka mandinika ny mety ho an'ny hackers sy ny olona hafa izay manana fikasana ratsy isika. Ny sasany amin'ireo fomba tsotra indrindra hackdia azo ampiasaina hiditra ao anaty database iray ny SQL Injection. Ny fiarovana amin'ny tranonkala tsirairay dia miankina amin'ny rafitra misy izay afaka manery ny halatra.Na izany aza, maro ireo teknika hafa izay ampiasain'ny olona mba hahazoana ny tranokalany ho antoka amin'ny hackers.